Rakhine State Calls for More Proposals on Planned Industrial Zone | Myanmar Business Today
Home Investment & Finance Rakhine State Calls for More Proposals on Planned Industrial Zone
The Rakhine State Government has called for more proposals for an industrial zone project in Ponna Kyun. It started selling K10,000 proposal forms on December 18 and the deadline for submission is January 17.
The state government has received one proposal, fromalocal company, Pyaywachanthar, fora1,800-acre industrial zone, whereas the state has allocated 1,963.74 acres on the east side of the Yangon-Sittwe road for the project.
Dr. Tun Min Thein, director general of the Rakhine State Investment Committee, said local and foreign companies are invited to submit proposals for the project, which includes infrastructure such as roads,awater distribution system and real estate.
The industrial zone will be home to small and medium-sized factories for textiles and garment, meats and fishery products and finished wood products. The state government said it is committed to provide tax incentives and land at reasonable prices to companies and institutions that invest in the industrial zone.
Under the Myanmar Investment Law, investing in the least developed states and regions, including Rakhine, entitles investors to years of tax exemption.
When the state government first invited tender application in 2015, Supreme Development Ltd. and Myanmar Kyauk Phyu Special Economic Zone Holding bid for the project. Myanmar Kyauk Phyu won the bidding andaMoU was signed in September 2015. The MoU was to be renewed every four months, but the company failed to renew itafourth time, rendering the agreement invalid on April 12, 2017.
ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသောဒေသတွင်ပါဝင်သော ရခိုင်ပြည်နယ်ပုဏ္ဏား ကျွန်းစက်မှုဇုန်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ယှဉ်ပြိုင်အဆိုပြု လွှာ ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်သော မြေဧက(၁၈ဝဝ)ခန့်ရှိသော စီမံကိန်းအတွက် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုက စီမံကိန်းအဆိုပြု လွှာတစ်ခုတင်သွင်းထားပြီး ယင်းအဆိုပြုလွှာ နှင့်အပြိုင် ယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်ရန်ဖိတ်ခေါ် ကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထား သည်။
စီမံကိန်းအတွက် စက်မှုဇုန်အင်္ဂါရပ်နှင့် အညီလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေပေးဝေမှု စနစ်၊ ကားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်းအပြင် မြေ ကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ရခိုင်ပြည် နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ ညွှန်ကြားရေး မှူး ဒေါက်တာထွန်းမင်းသိန်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းသောဒေသတွင် ပါဝင်သောရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အခြားသော သက်သာသောအခွင့်အရေးများ ရရှိလေ့ရှိပြီး ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ဖော် ဆောင်ရန်စီစဉ်ခဲ့သော ပုဏ္ဏားကျွန်း စက်မှု ဇုန်မြေနေရာအဖြစ် ရန်ကုန်-စစ်တွေကား လမ်း၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် စုစုပေါင်းဧရိ ယာ ၁၉၆၃ ဒသမ ၇၄ဧကခန့် လျာထားသတ် မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပြုလွှာများကို ဒီဇင်ဘာ(၁၈) ရက်မှ စတင်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၇)ရက် နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပြုလွှာတစ် စောင်လျှင် ကျပ်တစ်သောင်းနှုန်းဖြင့် ရခိုင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်းစက်မှုဇုန်အတွက် ပြီးခဲ့သော နိုဝင်ဘာလ၌ ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော ပြည့်ဝချမ်းသာကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာကို တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးကဆိုသည်။
စက်မှုဇုန်ဧရိယာတွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်ရုံများ၊ အထည်ချုပ်နှင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ပုဇွန်၊ သားငါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများ၊ သစ် အချောထည် လုပ်ငန်းစက်ရုံများ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleAfter Boeing Halts Max Production, Suppliers Wait for Fallout
Next articleMOGE Signs Contracts with MPRL E&P for Block A-6 Project